Fanontaniana sy valiny momba ny fambolena biby fiompy BSF • Yurie BSF
Momba ny BSF
Azafady azafady azafady amin'ny fanontaniana sy valiny momba ny magy BSF (fiaramanidina mainty) any SHARE (zaraina) mankany amin'ny media sosialy toy ny WA, FB, G +, Pinterest, LinkedIn Twitter etc. Antenaina fa ity fanompoana fizarana fahalalana ity dia mety ho tahiry amin'ny farany amin'ny manaraka. Aaamiinn
Fanontaniana sy valiny ho an'ny kamboty Catfish
Inona ny anaran'ilay vorona?
miaramila miaramila mainty (hermetia illucens) na fiaramanidina mainty hoditra.
Azo antoka ve ny olona?
manidina miaramila mainty (Hermetia illucens) Azo antoka ho an'ny olona satria tsy miteraka aretina toy ny karazana lalitra hafa izy ireo.
Ho an'ny tsipiriany, azafady jereo >> http://bit.ly/2KTuZu4
Inona no fahasamihafana amin'ny lalitra hafa?
manidina miaramila mainty (Hermetia illucens) tsy miteraka aretina.
Sakafo (Sarcophagidae), vorona maitso (calliphoridae), dia manidina (musca domestica) miteraka areti-mandringana.
Amin'ny lafiny ara-batana, ny haben'ny vatany sy ny loko dia tsy mitovy.
Taonan'ny lalitra miaramila mainty Mivantana haingana eo amin'ny 5 - 8 andro, raha hafa kosa ny lalitra hafa miaina mihoatra ny 30 isan'andro.
manidina miaramila mainty tsy afaka mihinana, ary miaina amin'ny ando na tantely.
Afaka miala amin'ny lalitra maitso sy ny lalitra.
Aza mitondra aretina toy ny karazana lalitra hafa.
Tsy hanangona sakafo amin'ny olombelona, ​​satria miaramila miaramila Aza mihinana
Miely tsara any amin'ny toetr'andro.
HO AN'NY SMELL
Voka-pifidianana efa be dia be raha tsy misy ireto BAU 10 manaraka ireto ny tombotsoa azo avy amin'ny biby fiompy BSF >> http://bit.ly/2IUBtHg
Inona no sakafo?
Mpiady miaramila mainty Tsy mihinana, ireo mihinana dia ankizy antsoina hoe larva na maggots na maggots.
Ahoana no hanavahana ny lahy sy ny vavy?
Ahoana no hanavahana ny firaisana? miaramila miaramila dia ny mijery ny fomban'izy ireo.
Ny firaisana amin'ny fiaramanidina vavy dia toy ny fanjaitra.
Raha ny lahy dia mitovy amin'ny ranon-javatra vita amin'ny vera.
Jereo ny antsipiriany ato http://bit.ly/2u3GB6p
Ahoana no ahafantaranao ny taonanao?
Ny hahafantarana ny taonan'ny BSF dia azo hambara amin'ny asany andavanandro.
Ny tanora BSF dia mijanona eo amin'ny rindrin'ny tranom-borona na eo amin'ny sampana.
Raha mbola manidina sy mifankatia ny olon-dehibe BSF.
Ahoana no ahazoana izany?
Alao avy amin'ny natiora.
Vidio amin'ny tantsaha.
Hamarino ny toerana misy ny farmasia 99 Indoneziana >> http://bit.ly/2AadIcv
Firy taona io?
Amin'ny ankapobeny, ny taona BSF dia eo anelanelan'ny valo sy efatra ambinifolo andro.
miaramila miaramila Maro ireo any amin'ny faritra maro misy hazo mamony.
Any Indonezia dia tsy maintsy misy satria mety ho lasa tsara any amin'ny tany tropikaly ireo lalitra ireo.
Inona avy ny fiterena toy izany?
pananahana miaramila miaramila Ao amin'ny rambony, ny endrika boribory lava malefaka dia mitovy amin'ny fanjaitra boribory.
Raha toa kosa ny lahy dia marefo toy ny glasa glasy na voninkazon'ny masoandro.
Rehefa misy vehivavy manaikitra ny taolany dia midika fa matotra izy ary vonona ny hifanambady.
Ho an'ny antsipiriany dia jereo> http://bit.ly/2u3GB6p
Rahoviana no hanomboka hamokatra izany?
Roa andro na efatra andro aorian'ny famoahana, dia nihalehibe ny BSF ary nifaneraserany.
Aorian'ny adiny iray isaky ny ora, dia ho faty ilay vorondolo lahy.
Raha ny vehivavy dia manidina roa na telo andro aorian'izay dia maty aorian'ny fametrahana atody.
Inona no sakafo tiany indrindra?
Tsy nihinana ny BSF, nandritra ny androm-piainany ihany izy no nisotro rano na tantely.
Misy BSF ve, ny lalitra hafa mandositra?
Misy lalitra maro ao amin'ny faritry ny toeram-pambolena maggot miaramila mainty Izy io dia handroaka ny karazana lalitra hafa amin'ny tenany ihany.
Izany dia noho ny volon'ny lalitra miaramila mainty Manaova feo / famantarana izay "marika" ny faritaniny.
Ohatra: raha misy saka na alika na liona manamarika ny faritaniny amin'ny "fanosotra" amin'ny faritaniny na ny faritany.
Amin'ny ankapobeny, ny olon-dehibe lehibe dia manambady aorian'ny taona 3 hatramin'ny 4 isan'andro.
Ahoana no ahafahanao mivady?
BSf mitsambikina eny amin'ny rivotra, mifamely, manambatra ny taova sy manodina eo amin'ny ravin-tsolika miaraka amin'ny tohatra tafahoatra.
Ny manaraka dia ny dingan'ny fanangonana na manao firaisana izao dia miverina izy ireo.
Ho an'ny antsipiriany dia jereo> http://bit.ly/2NpSY5L
Hafiriana no fotoana / fifandirana?
Ny fiantohana BSF na ny fanambadiana dia maharitra mandritra ny 5 - 10 minitra. Ankoatra izany, dia mifampiala izy ireo.
Ahoana no ataony atody?
Ny atody bgf bsf dia alefa amin'ny alalan'ny fiterahana vavy.
Rehefa alefa any amin'ny atody ny BSF dia mivoaka ny fitezan'ny BSF amin'ny haino aman-jery fanangonana atody toy ny ravina, peta-kofehy, hazo ary ny sisa.
Firy ny BSFs mametraka atody?
Ny BSF dia mamely indray eo anelanelan'ny 500 - 900 atody, na antsoina hoe cluster egg BSF
Inona no endriky ny atody toy ny?
Ny atody BSf dia manamboatra fotsy toy ny oval-loko ary manova tsikelikely ny loko.
Maggot zaza - tanora?
Rehefa mihintsana ilay lavaka kely dia mianjera mivantana ao anatin 'ny sakafo eo ambanin' ny sakafo.
Miaina mandritra ny telo ka hatramin'ny efatra herinandro ilay lavanila kely.
Nahoana no lehibe be ny lavadrano na ny maggots?
Fantatra fa henjana ny lanjany BSf satria afaka miaina anaty tontolo misy siramamy avo, alikaola ary sira (Amine) Dan amoniaka.
Ao amin'ny hafanana mangatsiaka sy ny tsy fahampian-tsakafo, ny lavenona BSF dia hipoitra (tsy mavitrika).
Ary hiverina amin'ny asa raha miverina amin'ny ara-dalàna ny mari-pana, na rehefa misy alika hafa indray.
Ny larva na ny maggots BSf dia miaina amin'ny dingana maromaro.
Marihina amin'ny fiovaovan'ny loko hoditra.
Ny fotsy hoditra dia mivadika ho mena.
Eo amin'ity sehatra ity dia afaka mitombo ny lava mba hahatongavana amin'ny 1,5 - 2cm.
Rahoviana i Maggot no manomboka mahazo?
Larvae dia manomboka mavitrika hatramin'ny famoahana, ao anatin'ny toe-draharaha iainana miaraka amin'ny sakafo be dia be.
Amin'ny andro iray, ny lavanila dia afaka manary fako mihoatra ny roa ampahefatry ny vatany.
Firy taona i Maggot?
Amin'ny ankapobeny, ny vanim-potoanan'ny magotiana dia eo anelanelan'ny telo sy efatra herinandro.
Inona no dikan'ny magngot detrivora?
vondrona detrivora midika mihinana zavamaniry ara-boajanahary toy ny zavamaniry, fako voajanahary, diky biby fiompy ary fako.
Manana tombony maro ve ny Maggot?
Manana tombontsoa maro ny BSF Maggots, satria manankarena amin'ny ronono, tavy, calcium, amino asidra ary proteinina avo.
Noho izany dia ampiasaina ho sakafom-biby ho an'ny trondro, ny biby fiompy, ny biby mandady, ny kisoa, ny biby fiompy ary ny omnivores.
Matetika ny maggots dia atao amin'ny:
Ny Maggot dia ampiasaina betsaka amin'ny fitsaboana amin'ny fitsaboana maggot.
Na ho an'ny polisy ho ampiasaina ho fitaovana hamantarana ny taonan'ny faty.
Any amin'ny firenena sasany dia lasa sakafo ankafiziny izy io ary misy ao amin'ny trano fisakafoanana. na nanaovana sakafo.
Nahoana ny Maggot BSF?
Tena manan-danja hatramin'ny fanombohana izay azonao tsara fa ny biby fiompy dia karazan'io karazana io miaramila miaramila na hermitia illucens.
Aza manidina ny lalitra maitso izay miteraka aretina.
Ny fomba hanavahana azy ireo dia mora, ny mainty BSF dia maitso ary ny lalitra maitso dia maitso.
BSF dia lava sy malefaka. Raha lava sy matavy ny lalitra maitso.
Prepupa dia ny taonan'ny lava lehibe efa ho telo na efatra herinandro.
Ny lava lava izay nahatratra ity dingana ity dia matetika hita avy amin'ny loko izay nanjary mainty.
Izany ve ny pupa?
Ny pupa na ny cocoon izay tsy ahitan'ny lavaka mangatsiaka ary tsy manjary toy ny maty.
Amin'ity vanim-potoana ity dia ny fizotran'ny taova, ny maso, ny tongotra, ny vavony, ny lohalika, sns.
Ny pupa na ny cocoon dia iray herinandro eo ho eo alohan'ny fiovana na ny fandehanana any anaty fiaramanidina miaramila mainty.
Inona no atao hoe bakteria tsara indrindra vita?
Kitapo misy lakolosy vita amin'ny simenitra sy biriky.
Kitapo misy lakandrano vita amin'ny biriky.
Kitapo boribory vita amin'ny fitaovana ambolena
Kitapo misy biriky na fitoeran-jiro
Kitendry hoditra hazo ny haben'io boaty atody io.
Fonosana hazo misy rihana maromaro.
Kitapo plastika na lavenona amin'ny habe rehetra.
Kitapo fandroana voankazo.
Raha toa ka tsy mihazakazaka ny fototry ny dobo simenitra?
Tondra-drano mitahiry rano no tsara kokoa noho ireo lakandrano eny amoron-drano, satria mety ho mavesatra kokoa ny fiakaran'ny rano.
Raha toa ny simenitra amin'ny endriky simenitra, dia tsy maintsy omena lavaka iray izy io izay itoerana ny rano amin'ny dobo.
Ahoana ny amin'ny fampiasana fantsona plastika na plastika?
Ny ampahan'ny plastika na plastika plastika dia tokony omena lavaka hanesorana rano be loatra ary miandrandra ny fisian'ny rano mihandrona.
Ny habetsaky ny lavaka sy ny habetsahana dia tokony hikarakara sy hahazoana antoka fa ny fitetezana ny rano dia ampy tsara.
Inona no mitranga raha mahalana loatra ny haino aman-jery?
Ity toe-javatra ity dia mampiseho fampahalalam-baovao izay tsy salama amin'ny fampiroboroboana ny hafanana ary miteraka tsiranoka.
Tsy salama ny areti-maso satria manelingelina ny rafi-pisefoana.
Hisy marary sasany hivoaka amin'ny tany ary handositra.
Inona avy ireo toetran'ny haino aman-jery mahasalama?
Ny toetoetr'ireo haino aman-jery mahasalama dia ireto manaraka ireto:
Mora ny media ary tsy miorim-paka ary tsy mandady.
Misy fampitam-baovao vaovao foana.
Ny media Maggot no fanalahidin'ny fambolena mahomby, inona no dikan'izany?
Ny haino aman-jery Maggot dia tontolo iray izay iainan'ny Maggot ary mamelona azy amin'ny maggot.
Raha salama ny tontolo iainana na ny haino aman-jery maggot, dia ho salama ny viriosy.
Mifanohitra amin'izany, raha tsy salama ny media maggot, dia hisy fiantraikany amin'ny fahasalamana sy ny fitomboan'ny famonoana.
Rahoviana ianao no hanome media vaovao?
Isan-kerinandro dia omen'ny media ny herinandro iray na roa herinandro mitovy amin'ny nomerao amin'ny media.
Ahoana ny fomba hikirakirana fampitam-baovao?
Ny haino aman-jery mahazatra dia tokony hotehirizina amin'ny fampidirana ireo media vaovao matetika.
Ny haino aman-jery dia mihamangatsiaka amin'ny fanondrahana tsy tapaka.
Inona no azo ampiasaina amin'ny media hosoka?
Ny molekiola malazo.
Orinasa voajanahary na compost.
Compost ny vokatry ny fery bakteria.
Duck / quail / cow / goat / rabbit / chicken / duck fertilizer.
Cocopit na voaniho coconut.
Bran na bran.
Jereo ny lalana eto http://bit.ly/2CuSxTY
Azo atao ve ny mampiasa lasagna toy ny maggot media?
Azonao atao, raha ny fampahalalam-baovao no manakaiky indrindra aminay.
Afaka mifangaro amin'ny media hafa ve ny media maggot?
Azonao atao, ny hevitra dia ny fampiasana fitaovana maody maimaim-poana amin'ny tontolo iainantsika.
Mila fampiraisana ve ny haino aman-jery maitso?
Raha ny marina, ny fampitam-baovao azo ampiasaina dia ny mediam-bahoaka, toy ny:
Tratra mekanika >> http://bit.ly/2EF2qAd
Branche na bran >> http://bit.ly/2IVj3G3
Palm oil waste >> http://bit.ly/2Nsy9qe
Kitapo menaka Palm.
Hanitrana diky. >> http://bit.ly/2EEktY9
Goat goat. >> http://bit.ly/2EA7lCl
Fikarakarana kolo. >> http://bit.ly/2RcfxPT
Fanosorana Quail. >> http://bit.ly/2pRXkI6
Ahoana no anavahanao kasgotia amin'ny media?
Tsy maintsy mifangaro amin'ny toerana iray ny kapaoty na marika marigadra na fanotan-java-maneno.
Mba hanavahana ny mangahazo avy amin'ny haino aman-jery, mazava tsara fa mainty ny endrik'ilay cassava, toy ny fasika fasika ny soratra.
Afaka omena alika mivolombolamena ve ny dongon-tany?
Jereo ny lalana eto http://bit.ly/2Lpt0OR
Azo ampiasaina ho toy ny maggot ny dihin'ny omby vaovao?
Jereo ny lalana eto http://bit.ly/2RcfxPT
Iza ary iza ilay mpilalao?
Ireo mpanafaka na ny fambolena fahavalo dia:
Inona avy ireo fepetra takiana amin'ny trano fonenan'ny BSF tsara?
Azonao jerena ny fepetra ilaina ao amin'ny Maggot ao >> >> http://bit.ly/2tWfj2o
Tsy maintsy misy fitaovana sy fitaovana sasany toy ny:
Toerana famotehana atody
Fomba hanamboarana Pasta maitso
Ahoana ny fomba hanaovana kobam-bary
Ahoana ny fomba fametahana vilia Maggot
Afaka mitombo ve ny fambolena hafanana?
Ny fambolena voajanahary dia tsy voakasika mivantana amin'ny haavon'ny tontolo iainana, toy ny hafanana na ny hatsiaka, ny faritra mafana na maina.
Satria misy vokany mivantana ny fampiroboroboana ny maggot dia ny feon'ny media mahagaga. Ary ny fampahalalam-baovao mahazatra dia mety ho voafetra araka ny fepetra takian'ny maggot.
Afaka misokatra ve ny fambolena fary?
Azo atao any ivelan'ny trano na any ivelany na any amin'ny efitrano mihidy ny fambolena fary.
Ny fambolena fary dia azo atao ihany koa ao anaty toerana feno fanamaivanana miaraka amin'ny fanamafisana ny rivotra sy ny tara-masoandro.
Dingana arahina amin'ny famokarana kalsioma
Ny tolo-kevitra momba ny fianarana ny fambolena alika dia tokony atao anaty dingana, dingana isan-kerinandro mba hahafahana mamokatra ny vokatra.
Ankoatra izany, ny vokatry ny fampiharana amin'ny dingana tsirairay dia tsy maintsy dinihina araka ny tokony ho izy na mila hanitsy.
Ny dingana manaraka amin'ny dingana manaraka dia ny fambolena maggot, anisan'izany ny marketing maggot
Toro-hevitra ho an'ny mpianatra sy ny zokiolona ho an'ny vokatra tsara indrindra
Ny fivarotana Maggot dia mora, fomba iray amidy ny mivarotra izany amin'ny tenanao mba hampiasaina ho fitaovana hampihenana ny vidin'ny fividianana pellets.
Raha tsy manana biby fiompinao ianao dia afaka manatona sy manatona ireo toerana voatanisa etsy ambany:
Fiarahamonina fambolena sy fiompiana.
Ny fiaraha-monina sy ny foibeny.
Fiaraha-monina sy foibe fambolena fary.
Kafe sy kalsioma.
Fanamboarana fototra ho an'ny filàna fanafody.
Fitantanana ny alàlan'ny fako miaraka amin'ny banky mando.
Nanomboka fandraharahana biby biby.
Manitatra ny trondro sy ny tsindrin-tsakafo.
Mividy amin'ny Yurie BSF.
Jereo ny fomba hivarotana ny Yurie BSF ho an'ny sahirana
Fampiofanana mivantana ny biby fiompy
Raha manapa-kevitra ny handray anjara amin'ny fiofanana fiompiana fambolena ianao, dia zava-dehibe ny tsy afaka mamokatra vongan-kena.
Fa mifidy toerana fampiofanana izay nahomby tamin'ny famoahana ny famokarana.
Ity manaraka ity dia programa fampiofanana miaraka amin'i Yurie BSF:
1. Famokarana MAGGOT BSF
Azonao atao ny mamolavola BSF maggot tontolo tsy manam-paharoa AZO BAU, miaraka amin'ny valiny be dia be ao anatin'ny 1,5 volana.
Kitiho ny EVIDENCE> http://bit.ly/2Lpt0OR
Azonao atao ny mamolavola maggot BSF amin'ny SPECIAL FORMULA mba hahavelona ny biby fiompy.
Kitiho ny EVIDENCE> http://bit.ly/2SXcBE8
SELL TO YURIE BSF !!! Tsy mila misavoana ianao momba ny varotra maggot, satria Yurie BSF dia hividy izany
Kitiho ny EVIDENCE> http://bit.ly/2Bu7zHQ
4. FAMPANDROSOANA BUSINESS
Yurie BSF dia nanome ny fanampian'ny namana Rp100.000.000 tsara indrindra azonao ampiasaina mba hampitomboana ny fahaiza-manaon'ny famolavolana ny fambolena Maggot.
Kitiho ny EVIDENCE> http://bit.ly/2oR86hp
5. AMBASSADOR YURIE BSFANDA TSY HISY.
AMBASSADOR YURIE BSF dia vonona ny ho tonga ao amin'ny toeram-piompianao
BOKY NOW! 0812-2105-2808
6. YURIE BSF Université
Ao amin'ny YURIE BSF UNIVERSITY dia omena fampiofanana manokana ianao. Mba hahazoana antoka fa ny fambolena BSF tsy misy fofona dia mifanaraka amin'ny SOP an'ny BSS maoderina tsy misy fofona (fomba fiasa serivisy).
Kitiho ny EVIDENCE> http://bit.ly/2A4kMY1
Kitiho ny EVIDENCE> http://bit.ly/2Lm1rGt
Ho ampahany amin'ny fampandrosoana ny orinasam-pambolena indostrialy ianao mba hihaona amin'ny fangatahana tsena anatiny sy iraisam-pirenena.
Ity programa CSR ity dia natao ho an'ireo izay tena tsy mahavidy hividy ny fonosana fambolena BSF tsy misy fofona.
10. MIVAVAHA SY MAHAY
Manomboka ny asa ataontsika isan'andro amin'ny vavaka dia tsy maintsy atao isika mba handroso mandritra ny andro miaraka amin'Andriamanitra.
Izany Yurie BSF tsy programa 10 izany no MAIN and NUMBER ONE amin'ireo programa 9 rehetra natolotra.
99 Toerana Ranch
Misy mpamboly matsiro ve ao an-tanànanao?
Hamarino ny toerana 99 ho an'ny toeram-pambolena maggot any Indonezia
Mahaiza mialoha ny fiarovana!
Na dia tsy azo antoka ho an'ny olombelona aza ny BSF, saingy amin'ny fampiharana dia hifanerasera amin'ny fako, ny diky biby sy ny fako toy ny solamin'ny menaka palma na ny tofu fako sy ny sisa.
Noho izany dia zava-dehibe ho antsika ny mampiasa fonon-tanana. Azo antoka fa hisoroka ny tanantsika amin'ny rivotra sy ny mikraoba.
Nahoana i Maggot no mila entam-barotra?
Ny Maggot dia misy proteinina tena mahavelona, ​​izay tena tsara tokoa raha ampiasaina amin'ny sakafo.
Ny sakafo haran-jazakely dia tena tanora, toy ny tsena fandevenana, toeram-pivarotan-tsakafo, dite, orinasa izay mora azo ary maimaim-poana.
Ny fambolena mamboly dia mora sy mora.
Ny fambolena dia somary haingana sy voajanahary tsy misy fery, tsy misy fanafody, tsy misy milina.
Ny loza ateraky ny aretina amin'ny fambolena alika dia somary kely.
Ny tombom-barotra ho an'ny Maggot amin'ny endriky ny pasta maitso, ny felam-bary, ny pellet maggot dia mivelatra be.
Tombontsoa momba ny lalitra maitso?
Tsy misy zavaboary tokana izay tsy misy tombontsoa, ​​anisan'izany ny lalitra maitso koa mahasoa.
Alefaso azafady ity lahatsary manaraka ity mba hahitana ny tombontsoa azo avy amin'ny lalitra maitso.